Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Bandhigga cusub ee Benny Hill ayaa mar kale soo noqday
Beadle's About - Kaamirada Qarsoon waxay ku soo noqotaa wadada
Bandhigga Benny Hill iyo TV-yada kale ee ugu cadcad wakhtiyadii hore waxay ku soo laaban doonaan shaashadaha TV-ga laga bilaabo caawa Taasi waa TV Christmas, Kanaal nostalgia ah oo baahiya xilliga Christmas-ka ee Freeview, Freesat, iyo Sky.
Dhinaca kale Benny Hill, Kanaalka waxa uu soo gudbin doonaa daawaynta farxadeed ee jadwalkii hore ee sannadkii hore oo ay ku jiraan Beadle's About iyo barnaamijyada Christmas TV ka Kenny Everett, Mike Yarwood, Tommy Cooper iyo Wadada kooxda.
Taasi waa TV Christmas waa rebrand xilliyeedka loogu talagalay Taasi waa TV Gold, Kanaalka TV-ga kaydka ah ee laga sii daayo UK oo dhan Freeview channel 91, Sky channel 187 iyo Freesat channel 178. Qaar badan oo ka mid ah TV-ga Christmas-ka ayaa sidoo kale laga heli karaa shabakadda TV-ga maxalliga ah ee That's TV kaas oo laga heli karo 20 goobood oo UK ah oo ku yaal kanaalka Freeview channel 7 ama 8.
Saacadda ugu horraysa ee Taasi waa TV Christmas-ka maanta (Khamiis 18 Noofambar 2021) saacadu markay tahay 9pm waa lacag-bixin labanlaab ah Bandhiga Benny Hill.
Bandhigyada kale ee toddobaadyada soo socda waxaa ka mid ah Beadle's About, Muuqaalka kamarada qarsoon ee uu soo bandhigay prankster Jeremy Beadle, kaas oo socday laga soo bilaabo 1986 ilaa 20 sano taasoo ka dhigtay bandhiga kamaradaha qarsoon ee ugu dheer aduunka. Midkoodna The Benny Hill Show ama Beadle's About kama sii dayn kanaalka TV ee UK muddo 19 sano ah.
Benny Hill waxaa halyey u ah majaajiliistayaal badan oo casri ah, oo ay ku jiraan xiddiga TV-ga iyo qoraaga David Walliams kan wax badan ka baryay TV-ga, isagoo ku leh Twitter 2017: "Waxaan jeclaan lahaa in Benny Hill looga dabaaldego TV-ga“. Majaajiliiste Tim Vine of Aan Bixin Caannimada ayaa sheeganaysa in ay hayso dhammaan cajaladihiisii ​​hore ee Benny Hill VHS oo leh: "Waligay kuma daalin, waxaanan filayaa in si wayn loo hoosaysiiyey. "
dabayaaqadii The Caroline Aherne, qoraa sitcom Qoyska Royale, ayaa u sheegay Documentary Channel 4 1998: "Aad ayaan u jeclaa Benny Hill", halka majaajiliiste Ben Miller of Armstrong iyo Miller caan baa yidhi: "Shaqadiisii ​​​​hore waxay ahayd mid la taaban karo. Waa majaajiliistaha ugu guulaysta masraxa aduunka oo dhan ee ingiriisku soo saaro. "
Benny Hill waxa uu ahaa muuqaal-waqtiga ugu muhiimsan ee TV-ga Ingiriiska afartan sano, markii ugu horreysay ee BBC-da ka dibna ITV halkaas oo bandhigadiisu ay socdeen 20 sano oo dheeraad ah ilaa 1989. Markii uu joogsaday in badan oo British ah ayaa ku qosli jiray Benny Hill marka loo eego daawashada Dayax soo degay wuxuuna ku guuleystay abaalmarintii ugu horreysay ee abaalmarinno badan 1954-kii markii loo doortay Shakhsiga Sannadka ee TV-ga. Bandhigga Benny Hill wuxuu helay wadar ahaan 11 abaalmarin intii uu la joogay ITV, bandhigyadiisana waxaa loo dhoofiyay in ka badan 140 waddan. Laakiin kuwan qadiimiga ah ee Ingiriiska, xuquuqda ay gacanta ku hayaan Estate-kiisa iyo Thames TV, ayaan shati loo siinin idaacad kasta oo UK ah ku dhawaad ​​20 sano.
Taasi waxay isbedeshaa caawa marka Taasi TV-ga Kirismaska ​​uu bilaabmo 7-toddobaad oo kale oo soconaya oo leh xilli Benny Hill khaas ah.
Taasi waa madaxa barnaamijyada Christmas-ka ee TV-ga, Kris Vaiksalu, wuxuu yiri: "Aad baanu ugu faraxsanahay inaan xaqiijinay xuquuqda labada bandhig ee ugu waaweyn taariikhda TV-ga Ingiriiska, The Benny Hill Show iyo Beadle's About. Bandhigyadani waa qayb ka mid ah hidaha dhaqanka ee qaranka. Daawashada majaajilada duugowday waa dhaqan qaran oo kirismas ah laakiin labaatankii sano ee la soo dhaafay kuwan ugu cadcad ayaa ka maqnaa xafladaha.
"Dhammaanteen waxaan u baahanahay xoogaa farxad ah oo soo socota sannadkii hore. Daawadeyaashayada ayaa nagu soo qulqulay codsiyo ah in aan tusno Benny Hill, waxaana aad ugu faraxsanahay in aan awoodno inaan ka dhigno rabitaanka Kirismaska ​​mid rumowday. Laakiin waxaa jira buskusyo badan oo kale oo ku saabsan Taasi waa TV Christmas. Waxaan la safnay nostalgia TV-ga Kirismaska ​​oo aan la socono qaar ka mid ah magacyada ugu caansan TV-ga iyo muusiga afartankii sano ee la soo dhaafay. Waxaan hiigsaneynaa inaan daawadayaashayada siino waqti Christmas gaar ah oo ay ka buuxaan xasuus sixir ah. Si fiican ayaad u fiirsataa… sababtoo ah Benny Hill iyo Jeremy Beadle waxay ku soo noqdeen hadalkaaga kirismaska ​​​​!"
Sannadkii hore Taasi waa summada Kirismaska ​​ee TV-ga waxa ay soo jiidatay in ka badan 4.4 milyan oo daawade afartii toddobaad ee u dambaysay 27ka Diseembar 2020 ( isha: BARB). Kanaalka hadda wuu fidiyey baahintiisa waxaana laga heli karaa UK oo dhan Sky iyo Freesat iyo sidoo kale Freeview.
Taasi waa TV-gu soo bandhigi doonaa fariimaha shaashadda taasoo soo jeedinaysa dareenka daawadayaasha in qaar ka mid ah waxyaabaha lagu soo bandhigay bandhigyada ay ka tarjumayaan heerarka wakhtiga bandhigyada markii hore la abuuray.
Daawooyinka kirismaska ​​​​ee muujinaya Taasi's TV Christmas waxaa ka mid ah:
Bandhiga Benny Hill - xulashada Benny Hill 20kii sano ee Thames TV 1969 ilaa 1989
Beadle's About - Bandhigga kamarada qarsoon ee habeenkii sabtida ee xiisaha badnaa kaasoo ahaa qayb ka mid ah jadwalka ITV ee 1986 ilaa 1996
Qaado Christmas-ka - afar nooc oo kirismaska ​​​​ah oo ka yimid shaqaalihii Carry On oo la sameeyay 1969, 1970, 1972 iyo 1973
Mike Yarwood Specials Christmas - majaajiliistaha iyo majaajiliistaha ayaa qayb ka ahaa jadwalka TV-ga Kirismaska ​​intii lagu jiray 70-meeyadii iyo 80-meeyadii. Taasi waa TV-ga Kirismaska ​​​​ayaa xaqiijistay xuquuqda bandhigyadiisa Christmas-ka ee 1982, 1984 iyo 1985
Sannadka Cusub ee Kenny Everett ee Khaaska ah- Majaajiliistaha majaajilada ah ee sanadka cusub ee gaarka ah ee 1978, 1979 iyo 1980 oo leh xiddigo magac weyn leh oo ay ku jiraan Rod Stewart, Cliff Richard, David Bowie, David Essex, Billy Connolly, Bob Geldof iyo Bastoolada Galmada. Waxaa dheer, sida daaweyn dheeraad ah oo loogu talagalay taageerayaasha Kenny Taasi waa TV Christmas waxaa lagu soo bandhigi doonaa barnaamijyo gaar ah oo asal ahaan loo sameeyay siideynta muqaalka oo aan waligood laga soo bandhigin TV-ga saaxiibada ay ka mid yihiin Cleo Rocos iyo dabayaaqada Lionel Blair
Tommy Cooper - Xulasho gaar ah oo ka mid ah Tommy Cooper oo keliya, oo ah sayidkii sixirka isku-dhafka ah
MUSIC, FANKA IYO DOCUMENTRY
Pavarotti: Gaar ah Christmas - kiraystaha caanka ah ayaa barnaamijkan ku soo bandhiga bandhig faneedyo fasaxa ah oo ku yaal Notre Dame Cathedral ee Montréal, oo ay ku soo biireen kooxda hobolada wiilasha, Les Petits Chanteur du Mont-Royal, iyo koox heeso ah, Les Xerta de Massenet (1978)
Tenor Irish Trio: Sheeko Christmas Classic ah - Isku-dar isku-dhafan oo heeso kirismas dhaqameed ah iyo heeso Irish ah oo uu sameeyay Irish Tenor Trio
100% Hits Christmas - shax-busting Christmas hits laga bilaabo '60s ilaa maantadan la joogo
Xiliga dokumentiyada ku saabsan dadka caanka ah iyo dhacdooyinkii qarnigii hore oo ay ku jiraan '70s Punk ee London, Princess Diana, John Lennon, King George VI, Margaret Thatcher, David Bowie iyoMichael Rockefeller
Ka dib astaanta dib-u-soo-celinta Kirismaska ​​Adeegga caadiga ah ee TV-gu wuxuu dib u bilaabi doonaa jadwal cusub 4ta Janaayo 2022.
KU SAABSAN SHOWGA BENNY HILL
Bandhiga Benny Hill wuxuu ahaa taxane majaajillo-kala-duwan oo Ingiriis ah oo ku yaal qaabka Vaudeville ee uu abuuray madadaaliyaha Ingiriis ee Benny Hill kaasoo laga sii daayay 23 Diseembar 1962 ilaa 26 Diseembar 1968 ee BBC iyo laga bilaabo 19 Disembar 1969 ilaa 1 Meey 1989 ee ITV.
Benny Hill waxa uu ku dhashay Alfred Hall sanadii 1925 waxana uu ku dhashay Southamton waxana qoyska iyo asxaabtii iskuulka ay ku xasuustaan ​​in uu ahaa 'fasalka clown'. Isaga oo dhalinyaro ah, waxa uu ka baxay dugsiga oo waxa uu u shaqeeyay sidii caano-maal ka hor intii aanu ka mid noqon ciidamadii Ingiriiska ee dagaalkii labaad ee adduunka. Inta lagu jiro wakhtigan, wuxuu ku maaweeliyaa ciidamada bandhigyo kala duwan wuxuuna qaatay magaciisa masraxa, Benny Hill, isagoo ixtiraamaya majaajiliiste Jack Benny. Dagaalkii ka dib, Hill waxa uu ku soo bandhigay hoolalka muusiga ee London oo uu nasasho ka helay TV-ga ka dib markii uu is barbar dhigay bandhigga madadaalada ee BBC. Bandhigadiisu waxa ay noqdeen wax aad u caan baxay 70-meeyadii, isaga oo Thames TV ka helay 26 milyan ginni iibka. Hill wuxuu ku dhintay London 1992 isagoo 68 jir ah, laba bilood ka dib markii uu wadno xanuun ku soo booday.
Markii Hill dhintay, jilaa Mareykan ah Jack Lemmon wuxuu yiri: "Sanadihii la soo dhaafay majaajiliistaha aan ugu jeclaa dhammaan wuxuu ahaa Benny Hill, kaasoo ahaa sayid beertiisa. Inta badan majaajileystayaasha waxay keenaan barar budo ah; Benny wuxuu ku siiyay xabbad madfac ah. "
KU SAABSAN BEADLE'S
Beadle's About Waxa uu ITV ka socday 1986 ilaa 1996 oo uu soo bandhigay kaftankii la taaban karo, Jeremy Beadle. Bandhigaasi waxa uu ku dheeli doonaa dhoola-tusyo iyo khiyaamo badan oo lagu samaynayo dadka aan la garanayn ee sida qarsoodiga ah looga duubay iyaga oo isticmaalaya kamaradaha qarsoon. Beadle waxa lagu tiriyaa dimuqraadiyaynta telefishanka, isaga oo dadka dhabta ah gelinaya xudunta bandhigyadiisa. Xiddigu waxa uu taageero weyn u ahaa Carruurta qaba Leukemia waxana uu ururiyey in ka badan 100 milyan ginni oo samafal ah, isaga oo helay MBE sannadkii 2001. Beadle waxa uu u dhintay oof wareenka sannadkii 2008 isaga oo 59 jir ah.
KU SAABSAN KENNY EVERET
Maurice Cole, oo loo yaqaan Kenny Everett, wuxuu ahaa majaajiliiste Ingiriis ah iyo jockey raadiyaha. Ka dib markii uu ku dhuftey raadiyaha budhcad-badeedda, waxa uu ka mid ahaa DJ-yadii ugu horeeyey ee ku biira idaacada cusub ee BBC-da ee 1dii. Everett waxa ay saaxiibo la ahayd dad caan ah oo uu ka mid yahay Freddie Mercury, hoggaamiyihii heesaaga boqoradda, kaas oo uu la kulmay markii uu soo bandhigayay Bandhigga Quraacda Idaacadda Capital 1967kii.
Dabayaaqadii 70-meeyadii Everett waxa uu keenay jilayaashiisii ​​radio gaaniga ahaa iyo jingles tv-ga isaga oo u sameeyay afar taxane ITV (Thames) ka hor inta aysan ugaarsan BBC1. Bandhigyada ITV waxay caan ku ahaayeen soo bandhigida qoob ka ciyaarka kooxda bandhiga, Hot Gossip, kuwaas oo uu sameeyay Arlene Phillips, kuwaas oo noqday Dame oo u adeega sidii mid ka mid ah garsoorayaasha asalka ah ee Qoob ka ciyaarka. Dhammaan bandhigyada Thames ee muujinaya xanta kulul ee Arlene Phillips, oo ay ku jiraan kuwa caanka ah ee sanadka cusub, ayaa laga sii dayn doonaa Taasi's TV Christmas.
Majaajiliistaha Michael McIntyre ayaa ku tilmaamay Kenny Everett "Aabihiisa kale" sababtoo ah saaxiibtinimada ka dhaxaysa waalidkiis iyo xiddiga. Aabbihii McIntyre wuxuu ahaa qoraa wax ku qora bandhigga Kenny Everett.
Everett wuxuu dhintay 1995, isagoo jira 50.
KU SAABSAN TAAS WAA SHABAKADDA TV-ga
Taasi waa TV Christmas (kaas oo u soo bandhigi doona sida "Taasi waa TV-ga Xmas" ee inta badan TV-yada) waxaa u shaqeeya That's TV, oo qayb ka ah Kooxda Warbaahineed ee Taasi.
Kaasi waa TV waxa uu maamulaa 20 adeeg oo TV oo maxalli ah iyo kanaal qaran oo UK ah oo hadda lagu suntay sida Taasi waa TV Gold, kuwaas oo dhamaantood dib loo summeeyay Taasi waa TV Christmas laga bilaabo 18 Noofambar 2021 ilaa 4 Janaayo 2022.
Taasi waa adeegyada TV-ga maxalliga ah ee TV-ga (Freeview channel 7/8) wuxuu u adeegaa in ka badan shan milyan oo guri oo ku yaal 20 deegaan oo UK ah. Taasi waa TV-gu waxa uu keenaa wararka iyo macluumaadka deegaanka diirada lagu saarayo goob kasta oo ay weheliso barnaamijka 'Laf dhabarta' ee shabakadaha ka kooban muusiga, madadaalada iyo dukumentiyada.
Kaasi waa kanaalka qaranka UK ee TV-ga oo la bilaabay July 2021 oo hadda laga heli karo UK oo dhan Freeview channel 91, Sky channel 187 iyo Freesat channel 178 Taasi waa TV Gold Ilaa 18ka Noofambar 2021, waa 'Hoyga Nostalgia' wuxuuna ugu horrayn soo bandhigaa majaajillo, muusig iyo maaweelo iyo dokumentiyo ku saabsan dadkii iyo dhacdooyinkii qarnigii hore.
Iyada oo qayb ka ah charterkeeda mas'uuliyadda bulshada, Taasi's TV waxaa u aqoonsan Hay'adda Mushaharka Nolosha Shaqaaleeyaha Mushaharka Nolosha Dhabta ah.